Ngaba ishishini lakho kufuneka libe kwi-Twitter? | Martech Zone
Ngaba ishishini lakho kufuneka libe kwi-Twitter?
NgoLwesithathu, uDisemba 14, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kungekudala, Twitter kutyhilwe ukuba ukudityaniswa kwe-Apple ngokuqinileyo kwe-Twitter kuye ukukhulisa ukusayinwa kwe-twitter ngama-25%. Emva kweminyaka yokuyiphepha, ndaye ndophuka ndaza ndafumana i-iPhone… ndiza kubhala malunga nayo kamva. Ndiyakuthanda ukudityaniswa okuqinileyo kwi-iPhone kunye ne-Twitter-ndicinga ukuba ndiyathandana ne-Twitter kwakhona!
Ngaphezulu kwe-100 yezigidi zabantu baye bathontelana kwi-Twitter ukusukela ngo-2006, babelana ngamabali, ukuqonda, kunye nemifanekiso yekati. Kodwa ngaba i-Twitter yeyakho ngokwenene?
Olu lwimi-kwi-cheek flowchart esuka kwi-FlowTown kunye neKholamu yesiHlanu malunga nokuba ishishini lakho kufanele ukuba likwi-Twitter limnandi na!
Ke… impendulo ngu-EWE! Kuya kufuneka ukwi-Twitter.
tags: ishishini twitterkufuneka ubekhona kwi-twitterukuba ishishini lakho likwi-twitterI-twitter yeshishiniKutheni le nto kufuneka ube kwi-twitter
Ukwazisa iWindowsPress Rotator Widget
Uphawu lwe-Avatar: Kuyabanda okanye kuyile?
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2011 ngo-11: 57 AM
I-infographic enomdla, kodwa isikwe kakhulu kwaye yomile. Zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa kufikwa kwisigqibo sokuba ingaba ishishini lakho kufuneka libe khona na kwi-Twitter.